Tutorial Quickoffice. Mamorona takelaka (I) | Vaovao IPhone
Tutorial Quickoffice. Mamorona takelaka (I)
Manohy ny ampahany faharoa amin'ny Torolàlana ho an'ny mpampiasa Quickoffice. Tao amin'ny lahatsoratra teo aloha dia efa nilaza taminay ny fomba famoronana Documents miaraka amin'ity fampiharana Google maimaimpoana ity izahay. Ankehitriny dia hanazava ny fomba famoronana Spreadsheets izahay.
Quickoffice dia afaka manokatra rakitra izay efa noforoninao tamin'ny extension .XLS. Ireo rakitra izay foronintsika amin'ity rindranasa ity dia ho voatahiry ao anaty endrika .XLSX, mitovy amin'ny mampiasa Microsoft Office ianao hatramin'ny andiany 2010.
Mba hamoronana Spreadsheet vaovao dia mila tsindrio ny kiheba ambany, eo amin'ilay kisary izay miseho eo amin'ny zoro.
Hisafidy Spreadsheet izahay ary hiseho ilay efijery manaraka.
Ny zavatra voalohany tokony ho fantatsika dia ny sela tadiavintsika manomboka manoratra angona hampiharanay ireo rijan-kevitra tsirairay avy. Raha atao default, ny sela voalohany misy dia A1. Raha te hanomboka hanoratra ao amin'io iray io isika, satria efa voafantina, dia tsy maintsy mandeha mivantana amin'ilay bara famolavolana, alohan'ny marika fx ary hiseho ny fitendry. Raha te hanoratra amin'ny sela hafa isika dia mila tsindrio fotsiny eo dia izay ihany. Raha te-hisafidy sela maromaro hanovana ny endrika na hanatanterahana asa isika dia mila tsindrio fotsiny ireo boribory manga amin'ilay sela lehibe.
Ankehitriny dia hanomboka hanazava ireo sary masina voalaza eo amin'ny bara ambony amin'ny fampiharana izahay.
B, Ampiasaina ampiasaina sahy karazana ao amin'ny sela na faritra ilainay. Mila misafidy ny sela na ny elanelana tadiavintsika hanan-kery fotsiny isika ary tsindrio ilay kisary.
I, Ampiasaina hampiasa ny nampiana ao amin'ny sela na faritra ilaintsika. Toy ny safidy teo aloha, tsy maintsy misafidy ny sela na ny elanelana tadiavintsika hanan-kery isika ary tsindrio ny kisary.
Ity kisary manaraka ity, marika dolara, dia hanome antsika safidy hamaritana ny karazana data tadiavintsika ho an'ny sela: Nomera, Vola, Datin'ny kaonty, ora, isan-jato, siantifika na soratra tsotra fotsiny.
Ny zavatra manaraka hitantsika, eo amin'ny bara ambony amin'ny efijery, dia ny anaran'ny tahirin-kevitra, miaraka amin'ny fanitarana azy ao amin'ny .XLSX.
Ho hitantsika manaraka izany ny kisary hidina andalana sy tsanganana mba hijanona ho raikitra izy ireo rehefa mandroso amin'ny takelaka isika. Safidy tena ilaina ho antsika izay miasa amin'ny takelaka izay mitaky andalana sy tsanganana marobe. Ny zavatra voalohany tokony ho fantatsika dia ny andalana sy ny tsanganana izay te-hidy ny takelaka ary apetrakao ny zoro ambony havia amin'ny sela manga (izay hifindrantsika) amin'ny fihaonana. Ohatra, raha te-hidy ny laharana 1 sy ny tsanganana A isika mba hamboarina foana izy ireo dia tsy maintsy mankany amin'ny cell B2 ary manindry ny hidin'ny sela.
Rahampitso, ampahany faharoa amin'ny lesona hamoronana takelaka miaraka amin'i Quickoffice.
Fampahalalana bebe kokoa - Quickoffice, mamorona antontan-taratasy
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Tutorial Quickoffice. Mamorona takelaka (I)
Fa raha te hidina amin'ny fanoratana amin'ny klavier aho dia tsy manan-tsafidy afa-tsy ny manindry sela isaky ny sela?
Famahana olana iMessage amin'ny iOS 7 (Tutorial)
Lahatsary: ​​ny iPhone 5 sy ny iPhone 5 amin'ny volamena, mifanatrika